Ogaden News Agency (ONA) – Ururka OYSU Faraciisa Denmark oo Gudi Cusub Doortay.
Ururka OYSU Faraciisa Denmark oo Gudi Cusub Doortay.
Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Somalida Ogadenya (OYSU) ee Denmark ayaa kulan ay ku yeesheen xarunta Jaaliyada Somalida Ogadenya ay ku leedahay caasimada wadanka Denmark ee Copenhagen, waxay ku doorteen gudi cusub oo ururka OYSU daadihin doonta labada sanee soo socota haduu ilaahay yiraahdo.
Kulanyan gudiga lagu doortay ayaa waxaa ka qaybgalay Maamulka Jaaliyada iyo Madax Sare oo kamid ah Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya ee JWXO. Sidoo kale waxaa goobta doorashadu ka dhacday kusugnaa qaar kamid ah hay`adaha kala duwan ee JWXO kuwaasoo kahawlgala dalka Denmark.
Maamulka cusub ee ururka OYSU faraciisa Denmark loo doortay ayaa laga sugayaa ineey dardar galin iyo horumar lataaban karo u horseedi doonaan ururka. Jaaliyada Denmarka ayaa waxay dadaal dheer ugu jirtaa sidii ururada bulshada ee ka hawlgala dalka Denmark sida Ururka Haweenka Ogadenya (UHO) iyo OYSU loo xoojin lahaa wax qabadkooda iyo horumarintooda.